Sidee Bin Salman u jabsaday talefonka Ninka ugu taajirsan dunida? | Somaliland Mirror
Home WARARKA Sidee Bin Salman u jabsaday talefonka Ninka ugu taajirsan dunida?
Sidee Bin Salman u jabsaday talefonka Ninka ugu taajirsan dunida?
adminJan 24, 2020WARARKA0
Taleefonka bilyineerka iska leh shirkadda Amazon ee Jeff Bezos ayaa la jabsaday sanaddii 2018 kadib markii uu farriin WhatsApp ah ka helay cinwaanka dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salman, waxaa sidaas weriyey wargeyska The Guardian
Dad ku dhow Maxamed Bin Salmaan ayaa u sheegay wargeyska Wall Street Journalinay ka war hayeen qorshahaha jabsashada, balse aysan waxba ka ogeyn in ujeedku ahaa in loogu hanjabo Jeff Bezos.
Previous PostONLF oo ku biirtay Isbahaysi cusub oo looga dhawaaqay Caasimada Itoobiya. Next PostGolaha Wasiirrada Jamhuuriyadda Somaliland Oo Ansiyey Xeer Muhiima.